Shirka Wasiirrada Gaashaandhigga Ee Is-bahaysiga La Dagaalanka Argagixisada Oo Riyad Ka Furmay – HormoodNews
11/26/2017 10:13 pm by HormoodNews Views: 6
Riyad (HMN): Wasiirradda gaashaandhiga ee dawladaha islaamka ayaa magaaladda Riyad ee dalka boqortooyadda sucuudiga waxa uga furmay shir lagaga hadlayo dhibaatadda ay kooxaha argagixisadda ah ku hayaan.
Shirkan waxaa dawladda Soomaaliya uga qayb galay wefti uu hogaaminayo raysal-wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar).
Waxaana shirkaasi isugu yimid in ka badan afartan xubnood oo ah wasiirrada gaashaandhigga ee dawladaha islaamka ah ee is-bahaysiga la-dagaalanka argagixisada.
Iyadoo shirkaasi mid diiradda lagu saarayo dhibaatada ay kooxaha argagaxisada ah ku hayaan dalalka Islaamka iyo sidii la isaga kaashan lahaa wax ka qabashadda kooxahaasi.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo khudbad dheer ka jeediyey shirka ayaa ugu horeyn uga mahad celiyay boqortooyada Sucuudiga ee marti gelisay shirka. Waxaanu ka hadlay sida ay dawladda Soomaaliya uga go’an tahay cidhib-tirka kooxaha xagjirka ah.
Mudane Khadar, ayaa ka warbixiyay dhibaatada kooxda Al-shabaab ku hayso shacabka Soomaaliyeed, isagoo soo qaatay qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho oo ay ku naf-waayeen shacab aan waxba galabsan iyo sidoo kale qaraxii bishan ka dhacay dalka Masar.
Geesta kale ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Mohammed Bin Salmaan, waxaanay ka wada hadleen adkaynta xidhiidhka labada dal iyo sidii la iskaga kaashan lahaa arrimaha amniga, dhaqaalaha, Waxbarashada iyo Caafimaadka.
Wefdiga Ra’iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa kamid ah La-taliyaha madaxweyne ee arrimaha ciidamadda S/Guud Bashiir Maxamed Jaamac iyo saraakiil sare oo ka tirsan xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.